Ny fahitana dia fahatsapana mivantana ny fanatrehan'Andriamanitra na ny andriamanitra na ny fanahy na ny zava-mitranga avy amin' ny tontolon' ny fanahy, izany fahatsapana izany dia heverin' ilay mahatsapa na izay mino izany ho tsy misy zavatra tokony hisalasalana sady mazava tsara.
Ny fahitana dia mety hitranga amin' ny alalan' ny nofy, ny fianjahana, ny fahavarianam-panahy, ary indrindra ny fisehoana mahagaga izay mampita fanambaràna avy amin' Andriamanitra na avy amin' ny andriamanitra na fanahy hafa. Matetika dia mazava kokoa noho ny nofy ny fahitana. Indraindray ny faminaniana dia miaraka amin' ny fahitana.
Ao amin'ny jodaismaHanova
Miresaka ny amin' ny fahitana ny Testamenta Taloha, ka isan' izany ny fahitan' i Mosesy (na Moizy). Tsy nisy nahita anefa Andriamanitra. Ireo fahitana ireo dia mitranga mba hampitan' Andriamanitra ny hafany. Raha misy fisehoana dia angamba ny an' ny anjely izany, na fisehoan-tsoratra, sahala amin' izay niseho tamin' ny firavoravoana nisy fiaraha-misakafo nataon' i Baltazara. Tena ny maso mihitsy no nahatsapa, satria ny Baiboly hebreo dia nampiasa ny matoanteny izay midika hoe "mahita". Matetika ny fehezanteny dia amin' ny fiendrika iharana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fahitana_(finoana)&oldid=1040266"
Dernière modification le 24 Novambra 2021, à 04:47
Voaova farany tamin'ny 24 Novambra 2021 amin'ny 04:47 ity pejy ity.